Reaction-yesondo lesilicon khabhayithi lokutshisa ipleyiti - China ZhongPeng Special Ceramics
It is a uhlobo lwemveliso ngamandla aphezulu, lukhuni phezulu, ukumelana phezulu wear, kunye nokumelana igcwala elungileyo, ukumelana ukothuka thermal kunye nezinye iimpawu. RBSIC uye ukusebenza ixesha elide elihle kakhulu (ethelekiswa RESIC kunye SNBSC) amandla ugoba kuliphinda-phinda kabini kwe RESIC,-50% aphezulu kwe SNBSC. Reaction kophethe silicon khabhayithi izicelo yodongwe: The emlilweni industrial ezahlukeneyo, izixhobo desulphurization, le boiers ezinkulu nezinye oomatshini, kwaye iiseramikhi, umatshini ...
It is a uhlobo lwemveliso ngamandla aphezulu, lukhuni phezulu, ukumelana phezulu wear, kunye nokumelana igcwala elungileyo, ukumelana ukothuka thermal kunye nezinye iimpawu. RBSIC uye ukusebenza ixesha elide elihle kakhulu (ethelekiswa RESIC kunye SNBSC) amandla ugoba kuliphinda-phinda kabini kwe RESIC,-50% aphezulu kwe SNBSC.
Reaction kophethe silicon khabhayithi izicelo yodongwe:
Emlilweni ezahlukeneyo mveliso, izixhobo desulphurization, le boiers ezinkulu nezinye oomatshini, kwaye iiseramikhi, oomatshini, lo yokunyibilikisa isinyithi, i elektroniki, imichiza, i-petroteum, ishishini intsimbi kunye intsimbi, ishishini emkhosini, kushishino lweenqwelo kunye nezinye emasimini.
Itheyibhile yeengcombolo ezivelileyo Technical:
ingxinano g / cm3 3,02
porosity okubonakala % <0.1
Strength yokugoba MPA 250 (20 ℃)
Modulus of luthambe uTsvangirai 330 (20 ℃)
uTsvangirai 300 (1200 ℃)
Conductivity thermal W / nguMkhonto 45 (1200 ℃)
Kuchazwa thermal k-1 × 10-6 4.5
Vickers-yobulukhuni uTsvangirai 20
Alikaline Acid-Ubungqina Excellent
Previous: Reaction kophethe Silicon khabhayithi ipleyiti
Okulandelayo: Reaction-yesondo lesilicon khabhayithi ipleyiti
Ubushushu High Plate Resistant ka eontini
Reaction kwii Silicon khabhayithi Plate
Reaction kwii Silicon khabhayithi Pusher Plate
Reaction-kophethe Silicon khabhayithi lokutshisa Plate
Silicon khabhayithi eziko Furniture
Silicon khabhayithi Plate
nemilo Amacwecwe yodongwe Special
RBSiC (SiSiC) Iziko
Suppliers imveliso iimbumbulu
RBSiC (SiSiC) sokukhuphela tube, sokukhuphela umlomo